UrbanMain ဦး ဆောင်ကော်မတီ• DutchtownSTL.org •ဒတ်ခ်ျတောင်း၊ စိန့်လူးဝစ္စ၊ MO
UrbanMain ဦး ဆောင်ကော်မတီ
အဖွဲ့ဝင်များနှင့်တွေ့ဆုံပါ UrbanMain ဦးစီးကော်မီတီ! ကော်မတီ ၀ င်များသည် Dutchtown ရပ်ကွက်အတွင်းရှိအခန်းကဏ္ in အမျိုးမျိုးရှိသောနေထိုင်သူများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့်အဖွဲ့အစည်းများကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ပဲ့ကိုင်ကော်မတီသည်အလုပ်လုပ်လိမ့်မည် မစ်ဆူရီပင်မလမ်းဆက်သွယ်မှု, Dutchtown မြို့လယ်, အ Dutchtown CID, နှင့်အခြားအဖွဲ့အစည်းများသင်တန်း၏လမ်းပြကူညီပေးသည် မြို့ပြအဓိကရှေ့ပြေးအစီအစဉ် Downtown Dutchtown တွင်ကွပ်မျက်ခံရသည်။
ဒီစာမျက်နှာကိုမျှဝေပါ Facebook က, တွစ်တာဒါမှမဟုတ် အီးမေးလ်လိပ်စာ။ ဤစာမျက်နှာကိုနောက်ဆုံးပေါ်မွမ်းမံခဲ့သည် နိုဝင်ဘာလ 7th, 2020 .
ဒိန်းမတ် Downtown Dutchtown ရှိ UrbanMain Initiative UrbanMain ဦး ဆောင်ကော်မတီ